Mastermind of Changemakers (Myanmar Youth Initiative) | Myanmar Youth Empowerment Opportunities
Mastermind of Changemakers (Myanmar Youth Initiative)
Venue: Burma Bistro Restaurant,Yangon
Description :Myanmar Youth Initiative မှ မတ်လအတွက် “Masterminds of Changemakers” ဟောပြောပွဲကို ကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ စွန့်ဦးတီထွင်စီးပွားရေး ကိုစိတ်ဝင်စားသူများ၊ လူမှုရေးနယ်ပယ်တွင် အပြောင်းလဲလုပ်လိုသောသူများနှင့် ကျောင်းသားလူငယ်များအတွက် ဒီပွဲလေးမှတဆင့် အကျိုးရလဒ်တစ်ခုကို ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
Descrption :Myanmar Youth Initiative မှ မတျလအတှကျ “Masterminds of Changemakers” ဟောပွောပှဲကို ကငျြးပသှားမှာဖွဈပါတယျ။ စှနျ့ဦးတီထှငျစီးပှားရေး ကိုစိတျဝငျစားသူမြား၊ လူမှုရေးနယျပယျတှငျ အပွောငျးလဲလုပျလိုသောသူမြားနှငျ့ ကြောငျးသားလူငယျမြားအတှကျ ဒီပှဲလေးမှတဆငျ့ အကြိုးရလဒျတဈခုကို ရရှိမှာဖွဈပါတယျ။
Main Speaker – Bayarsuren Yalalt
(Co-Founder, Ger to Ger Agency and
*Sully Bholat @ Htet Aung Latt
(Founder and CEO, Flexible Pass)
*Aung Ye Kyaw
(Founder and CEO, White Merak)
*Phoo Pwint Eain
(Founder and CEO, MM Tutors)
For register (စာရင်းပေးရန်) – http://bit.ly/2oxlLud
(*Very Limited Seats for Attendance )
For more information,you can visit original post.
Or you can contact (+95)9 4210 36631, (+95)9 7319 6975, (+95)9 254 259 136.
Mastermind of Changemakers